सबैभन्दा धेरै छावा जन्माउने पूजाकलीको निधन – " कञ्चनजंगा News "
सबैभन्दा धेरै छावा जन्माउने पूजाकलीको निधन
No Comments on सबैभन्दा धेरै छावा जन्माउने पूजाकलीको निधन
८ पुस, चितवन । लामो समयदेखि बिरामी परेकी ३८ वर्षीया हात्ती ‘पूजाकली’को मृत्यु भएको छ । हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र सौराहामा पालिएको पूजाकलीको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
पूजाकलीको एक वर्षअघिदेखि नियमित उपचार हुँदै आएको थियो । निकुञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजय श्रेष्ठले भने, ‘एक वर्षदेखि धेरै रोगको परीक्षण गरेर उपचार गरियो, लाखौं खर्च भयो, तर रोग पत्ता लागेन ।’ पूजाकलीको शव परीक्षणको तयारी भइरहेको छ ।
झण्डै आधा दर्जन छावालाई जन्म दिएकी पूजाकली पछिल्लो छ महिनादेखि खाना कम खाने र दुब्लाउँदै गएकी थिइन् । सौराहाको खोरसोरस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्रका अनुसार पूजाकाली सबैभन्दा धेरै छावा जन्माउने हात्तीमा पर्छिन् ।
← हरिद्वारमा प्रचण्डपत्नी सीता दाहालले पतंजलिका आचार्यलाई छोराजस्तै माया गरेपछि … → रिचार्ज गर्दा कार्डको पिन नम्बर मेटियो ? यसरी गर्नुहोस फेरी रिचार्ज